Vaovao - Ahoana ny fomba ahazoana ny fitokisan'ny mpanjifa amin'ny fiaraha-miasa voalohany
Fomba ahazoana ny fitokisan'ny mpanjifa amin'ny fiaraha-miasa voalohany
Mikasika ny fividianana milina indostrialy avy amin'ny mpanjifa vahiny, inona avy ireo lafin-javatra lehibe indrindra amin'ny fifanakalozana?
Ankehitriny izahay dia te hiresaka momba an'io olana io amin'ny iray amin'ireo tranga niainantsika vao tsy ela akory izay.
Background: Cali dia avy amin'ny iray amin'ireo mpanamboatra any Los Angeles, Etazonia, ny orinasa dia mila mividy firavaka haingon-dranomandry Fotsy ririnina milina fanoratana tavoahangy boribory ho an'ny tavoahangy plastika 25ml misy hazo 6. Ahoana no hataontsika amin'ity raharaha ity?
1.Mahita ny olana sedrain'ny mpanjifa: tsy mbola nahazo vola avy tany Sina izy ireo talohan'izay. Ny fividianan'izy ireo teo aloha dia natao tamin'ny alàlan'ny Ebay; Ka tsy manana traikefa ampy amin'ny olana hafa mifandraika amin'ny varotra iraisam-pirenena izy ireo.
Ohatra, mila ny milina maika izy ireo, saingy tsy noheverin'izy ireo fa ity milina indostrialy ity dia namboarina mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa, mila fotoana bebe kokoa izany. Fa dia nikaika ny andro fandefasana fotsiny izy ireo. Misy ihany koa antony hafa hafa izay hisy fiantraikany amin'ny tolotra fandefasana, toy ny fandoavam-bola TT, tsy manana traikefa firy andro hahatratrarany ao amin'ny kaontinay izy ireo. Noho izany dia mila mandinika ny hanome torohevitra tsara indrindra isika ny fomba ahazoana ny fandoavam-bola aloha araka izay tratra mba hahafahantsika manomboka haingana ny famokarana.
2.Amin'ny fahitana ireo olana etsy ambony, dia mila manome valiny arak'asa ho an'ny mpanjifa faran'izay haingana isika mba hitsimbinana fotoana.
3.Oleo ny mpanjifa ny tolo-kevitra mety. ny injenieranay dia mampiasa CAD hanamboarana sary. Anisan'izany ny fihinanam-bilona fihinanam-bilona, ​​fampitana, codjet inkjet, masinina fanoratana tavoahangy boribory (faribolana feno), kojakoja marika ambony ambony, latabatra fanangonana efamira sns, miaraka amin'ny habe sy ny fikirakirana. Na inona na inona mpanjifa dia mpividy matihanina na tsia dia manao drafitra sy antsipiriany mialoha izahay.
4.Analy ny olana efa nisy: ny foiben'ny gravitry ny mpanjifa dia tsy voalanjalanja, ahoana no ahazoana antoka: 1) ny fahamarinan'ny mari-pamantarana ny masinina; 2) mifanaraka ny faran'ny roa amin'ny marika; 3) mahatratra 120 tavoahangy isa-minitra ny hafainganana araka ny takian'ny mpanjifa. Rehefa miresaka momba an'io tranga io izahay alohan'ny hamaritana farany ny baiko dia nanoro hevitra ny mpanjifa izahay mba handefa ny tavoahangy sy ny marika ohatra faran'izay haingana. Rehefa nahazo santionany izahay (tavoahangy, horonana marika sns.). Ny injenierantsika dia nanova ny sarin'ny rafitra sasany, miova ho marika marika kodiarana kintana hanatsarana ny hafainganam-pandehan'ny marika hatramin'ny 120 tavoara isa-minitra.
5. Soso-kevitra ny hampiasa ny zotram-piaramanidina mba hahazoana antoka fa tonga ara-potoana ilay milina raha dinihina dia 10 andro sisa tavela mandritra ny fotoana famokarana. Amin'ity toe-javatra ity dia nanamarina ny dingana rehetra izahay niaraka tamin'ny sampana mpamokatra fa ny akora efa voarindra mialoha sy ny sampan-draharahan'ny famokarana miasa mandritra ny fotoana fohy mba hamita ilay milina amin'ny fotoana fohy indrindra hahatratrarana ny takian'ny famokarana.
Miaraka amin'ny ezaka ataontsika, dia nahomby ny famenoana ny filaharan'ny milina fanoratana niaraka tamin'ny mpanjifa voalohany.
Fotoana fandefasana: Dec-15-2019